फोरमलाई अहिलेको सरकारमा ल्याउने जुन कार्य गरियो, त्यसले कैयौं गम्भीर प्रकारका आशंकालाई जन्म दिएको छ । कसैलाई सरकारमा सामेल गर्ने वा नगर्ने, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । तर त्यस सन्दर्भमा यो स्पष्ट छ कि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षमा दुई–तिहाई मत जुटाउन नै फोरमलाई सरकारमा सामेल गरिएको हो । तर त्यससित जोडिएको अर्को त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्षप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा दुई–तिहाई बहुमत जुटाउने उद्देश्य पूरा गर्न, फोरमका संविधानमा राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरु पारित गराउने कुनै आन्तरिक समझदारी ता बनेको छैन ? त्यसो गरिएको भए त्यो गम्भीर राष्ट्रघातको कार्य हुनेछ ।
फोरमका नेताहरुले बारम्बार संविधानमा संशोधनका कुरा उठाइरहेका छन् । तर सरकार र फोरमका बीचमा त्यसबारे कुनै समझदारी भएको छ वा छैन ? त्यसो गरिएको भए त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुनेछ । त्यस प्रकारको राष्ट्रघातको मूल्यमा फोरमसित गठबन्धन गरेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीलाई कायम गर्ने प्रयत्न ता गरेको छैन ? प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ।
संसारका कतिपय देशहरुमा भएका कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीका उदाहरणहरु अगाडि छन् । कैयौं देशहरुमा त्यो प्रणाली सफल भएको छ । तर टर्की र अमेरिकाको राष्ट्रपति प्रणाली कति अधिनायकवादी र विकृत रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ? त्यो विश्वका अगाडि प्रत्यक्ष छ । यो स्पष्ट छ, नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कम विकास भएकाले र राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारको अत्यन्त कम विकास भएकाले र देशमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली कायम भएमा त्यसको परिणाम स्वरुप हाम्रो देशमा तानाशाही व्यवस्थातिर जाने कुरा निश्चित छ । अहिले संसदीय प्रणाली अन्तर्गत पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुमा प्रत्यक्ष मात्रामा अधिनायकवादी प्रणाली देखापर्ने गरेका छन् । त्यो अवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नै कायम भएमा त्यसका कति धेरै दुष्परिणाम हुनेछन् ? अनुमान गर्न मुश्किल पर्दैन । हाम्रो पार्टीले संसदीय प्रणालीलाई पनि सिद्धान्ततः समर्थन गर्दैन । तैपनि वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुने भएकाले कार्यकारी राष्ट्रपतिका तुलनामा त्यो बढी प्रजातान्त्रिक हुनेछ । त्यसैले हाम्रो पार्टी वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका ठाउँमा राष्ट्रपति प्रणालीलाई गलत र अप्रजातान्त्रिक ठान्दछ र त्यसको विरोध गर्दछ ।
मिति ः २०७५ जेष्ठ २२ गते